Akụkọ - Nyochaa ọrụ rụzuru nke GUANGXI G&M GLOBAL ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD na 2020
Nyochaa ọrụ rụzuru nke GUANGXI G&M GLOBAL ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD na 2020
Taa, General Manager Chen Zhifeng, onye na-elekọta Guangxi New Foreign Trade Incubator Base, nwere nzukọ nchịkọta nke GUANGXI G&M GLOBAL ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.in 2020.
N'ime afọ pụrụ iche nke 2020, ụlọ ọrụ anyị meriri nsogbu ọjọọ nke ọrịa COVID-19, na-arụsi ọrụ ike na mpaghara kwụụrụ onwe ya na gọọmentị gọọmentị Nanning iji mepụta mgbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa na-efe efe na-aga n'ihu, na-akwalite ọrụ ọrụ nke Ntọala, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite ma nweta nsonaazụ dị ịrịba ama.
1.Ọgụ megide COVID-19
N'ime oge mgbochi ọrịa na oge nchịkwa, ụlọ ọrụ anyị ghọrọ onye otu Guangxi anti-COVID-19 na-akpata ọrịa ịzụrụ ihe, wee bụrụ naanị ụlọ ọrụ mmezi omenala nke Guangxi Red Cross Society họpụtara maka ihe ndị enyere na mba ofesi.
N'ihe banyere ịkwado ịmaliteghachi mmepụta na ịrụ ọrụ na mpaghara na obodo dị iche iche, ngụkọta nke ihe karịrị nde 2 masks na-ebubata, na-enye nkwa siri ike maka ịmaliteghachi mmepụta na ọrụ na mpaghara niile na obodo niile.
Mmepe nke oru zuru oke maka ahia ndi mba ozo
Companylọ ọrụ anyị dechara data mbubata na mbupụ nke $ 215 nde US, ngụkọta nke ụlọ ọrụ nkwekọrịta ọhụrụ ọhụrụ 16, na ụlọ ọrụ 11 nwere data mbupụ n'ezie.
Wụpụta iwu mkpuchi mkpuchi mbubata mbubata mbụ na Guangxi Sinosure history, bụrụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi mbụ ịzụrụ mkpuchi azụmaahịa na Guangxi Sinosure history.
N'ihe banyere ego ọhụrụ, anyị eruola imekọ ihe ọnụ na Nanning Financial Investment Group na gọọmentị nke Nanning High-tech Mpaghara iji jikọọ aka wuo "Nanning export-oriented enterprise support fund pool".
Anyị ga-arụsi ọrụ ike ịkwalite atụmatụ nkwado nke "gọọmentị, ụlọ akụ na ụlọ ọrụ".
Ọgwụgwụ nke azụmaahịa "amụma" na Bank of Guilin abụrụla azụmaahịa azụmaahịa izizi nke enwere ike ịkwado site na iji Sinosure n'akụkọ ihe mere eme nke ọrụ ndị ejikọtara na mpụga na Guangxi, na-edozi nsogbu nke mbupụ na mpaghara anaghị anwa anwa nara iwu ma ghara anwa anwa ire na kredit.
3. dị irè nke azụmahịa ọhụrụ
Development nke mba ahịa
GUANGXI G&M ENLTER TERLỌ TERLỌ TERLỌ AKW MANKWỌ CO., LTD. na-eburu ụzọ isi na njedebe njedebe nke ọrụ ndị ejikọtara na mpụga gaa n'ọnọdụ njedebe, na-eji ahụmịhe ahịa nke esenidụt na ijikọta njirimara nke ahịa esenidụt, na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya maka mmepe ahịa nke esenidụt maka ụlọ ọrụ mmepụta na Guangxi, ma na-enyere ha aka ịchọta iwu ndị esenidụt.
Companylọ ọrụ anyị enwetawo azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta 5, ngụkọta nke tebụl 17 nke ngwaahịa ebupụ, ọnụahịa azụmahịa nke ihe dị ka dollar 350000 US, metụtara ihe owuwu ụlọ, seramiiki, ngwa ụlọ na ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ihe ngosi ntanetị
N'ihu mmetụta mmetụta nke COVID-19, ihe ngosi ntanetị na usoro ntanetị iji rụọ ọrụ maka mkparịta ụka na ndị na-azụ ahịa si mba ofesi.
Anyị meriri China Guangxi-Vietnam Import Commodities online Fair (ihe omume pụrụ iche maka ngwaahịa na nri nri), China Guangxi Medical material Export online Fair, China Guangxi-Vietnam Commodity online Fair (nnọkọ pụrụ iche maka iwuru ụlọ na ngwaahịa ụlọ), nyere aka na Ngalaba of Commerce iji jide Vietnam Litchi Festival pịa ogbako, Hong Kong na Macao Office Guangxi ruru eru ngwaahịa (Hong Kong) online Ngosi, China (Guangxi) -Indonesia online Fair. Ego nke azụmahịa ahụ ezubere bụ yuan 3 ijeri.
Ọrụ nke ọhụrụ incubator isi mba ọzọ
Mee mma ma mejuputa square mita 2000 nke oghere ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọtụtụ ọrụ na ntọala incubator; hazie ma wuchaa 1000 square mita offline ngosi ụlọ nzukọ; debanye aha na ụlọ ọrụ 65 na-ebupụ mbupụ na isi.
Wulite nyiwe e-commerce dị oke ala dịka LAZADA, Shopee na Facebook, ma mepee ọnụ ụlọ gafere na-asọ asọ na-asụ asụsụ ndị pere mpe.
Site na nguzobe nke www.global-gm.com, ụlọ ọrụ Guangxi nwere ike mepee ụlọ ahịa n'elu ikpo okwu n'efu, soro ndị ahịa si mba ofesi kparịta ụka, ma kwụọ ụgwọ n'ịntanetị.
5. Nlekọta ndị ndu
Na August 20, Lu Xinshe, onye odeakwụkwọ nke kọmitii otu nke mpaghara kwụụrụ onwe ya na onye isi oche nke kọmitii na-anọchi anya ndị omeiwu na-ahụ maka mpaghara ndị ọbịa bịara n'ụlọ ọrụ anyị.
Na Septemba 28, ninglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ofesi Ofesi na-ahazi ndị isi si Consulate General nke mba isii ASEAN na Nanning na Liaison Office nke Hong Kong SAR Government na Guangxi inyocha ụlọ ọrụ ahịa ahịa mba ofesi ọhụrụ na Guangxi wee gaa Guangxi Import na Export Commodities Ngosi na Exchange Halllọ Nzukọ.
6. Mgbasa ozi
Na November 27th, CCTV-2 (Ego na Ego Ego) kwupụtara maka atụmatụ azụmaahịa GUANGXI G & M na-abịa n'ihu na mpaghara RCEP.
Anyị anaghị echefu ebumnuche mbụ, ma nwee ike ịga n'ihu, na-anwa ịkwalite azụmahịa anyị na ụwa niile.
Guangxi Radio na Akụkọ News 910, ya na Officelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Tradelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Freezụ ahịa Na-arụ Ọrụ na China (Guangxi), amalitela usoro ihe nkiri dị mkpirikpi iji kọwaa ụkpụrụ nke China (Guangxi) Mpaghara Nnwale Azụmaahịa Na-adịghị Anya.
Na 2021, GUANGXI G&M ga-ebupụta atụmatụ mmepe azụmahịa maka ASEAN na mba RCEP, mepụta sistemụ ọrụ zuru ezu maka mbubata na mbupụ, ma kwado owuwu nke mpaghara azụmahịa na-akwụghị ụgwọ.